बुटवलमा अब कोरोनाको रिर्पोट आधा घण्टामैं | Mechikali Daily
Posted By: रमेश पराजुलीon: ३० श्रावण २०७७, शुक्रबार १६:५०
बुटवल, साउन ३० । बुटवलमा द्रुत गतिमा कोरोना जाँच गर्ने सेवा सुरू भएको छ । बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा ३० मिनेटमै कोभिड–१९ को परीक्षण गर्न सकिने द्रुत परीक्षण सेवा शुक्रबारबाट सुरू गरिएको हो । अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना हुन आउने गम्भीर प्रकृतिका बिरामीमा भर्नापश्चात् कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि यस्तो सेवा शुरु गरिएको हो । यो सेवाले संकास्पद विरामीलाई सहज हुनेछ ।
द्रुत परीक्षण सेवाको प्रदेश पाँचका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले मेसिनबाट आफनै स्वाब परीक्षण गरी सेवा सुरू गरे । नेपाल सरकार राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध जिन एक्सपर्ट मेसिनलाई अपडेट गरी अस्पतालमा एक्सपर्ट एक्सप्रेस सार्स कोभ–टु परीक्षण सेवा सुरू गरिएको प्रादेशिक अस्पतालले जनाएको छ । सामान्य पीसीआर परीक्षणको समावधि ढिला हँुदा उपचार समस्या भएको गुनासो आइरहेको बेला यो मेशिनबाट सहयोग मिल्ने उनले बताए । सेभ द चिल्ड्रेनका वरिष्ठ कार्यक्रम ब्यवस्थापक निमबहादुर सिहले यो विधि निक्कै प्रभावकारी र गुणस्तर भएको दाबी गरे ।
अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा.राजेन्द्र खनालले मेशिनबाट कोरोना भाइरस का को संकास्पद बिरामीको रिर्पोट पोजिटिभ भए ३० मिनेट र नेगेटिभ भए ४५ मिनेटमा नै उपलब्ध हुने हुँदा यो धेरै प्रभावकारी भएको बताए । अस्पतालका अस्पतालका अध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराईले अस्पतालमा धेरै सेवाहरु वृद्धि गरिएको बताए। भौतिक संरचनादेखि सेवा बिस्तारमा आफुले जोड दिएको उनले दाबी गरे । प्रदेशमा पाँचमा कोरोना भाइरसका जटिल र लक्षण देखिने बिरामी बढेको भन्दै सर्तक र सुरक्षित रहनुपर्ने अवस्था छ ।
अस्पतालका बिआर टिभी क्लिनिङ ईन्चार्ज सत्यराज शाक्यले क्षयरोगी र एचआईभी संकमितलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर सेवा दिईने बताए । अन्य मेशिनको तुलनामा यसले छिटो रिर्पोट दिने हुदा प्रभावकारी भएको उनले बताए । यो निशुल्क सेवा भएको उनले बताए । एक घण्टामा ४ जनाको परिक्षण गर्न सकिने उनले बताए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकारीलाई कोरोना
प्रदेश पाँचको सामाजिक विकास मन्त्रालयका कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण भएको छ । मन्त्रालयका सचिव डा. गोपीकृष्ण खनालले स्वास्थ्य महाशाखाका कर्मचारीमा संक्रमण देखिएको पुष्टि गरे । उनले भने, ‘संक्रमित होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ । अन्य कर्मचारीहरुको पनि पीसीआर जाँच गराउदै छौ ।’
मन्त्रालयका अधिकारीलाई संक्रमण देखिएपछि सबै कर्मचारीको पीसीआर जाँच गराउने तयारी भइरहेको छ । खनालले मन्त्रालयबाट गरिने काम भने नरोकिने स्पष्ट पारेको छ । ति अधिकारीको पीसीआर रिर्पोट पोजेटिभ आएपछि सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बराल र स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशन डा. विनोद गिरीको पीसीआर जाँच गरिएको थियो । उनीहरु दुवै जनाको रिर्पोट नेगेटिभ आएको छ ।